သတ်ပုံမှားနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ ဗီဇပြောင်းလဲလာခြင်း အနေအထား(အခုပေါ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ အလုပ်မှ ဖြစ်ပါ့မလား) – New Of Burmese
သတ်ပုံမှားနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ ဗီဇပြောင်းလဲလာခြင်း အနေအထား(အခုပေါ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ အလုပ်မှ ဖြစ်ပါ့မလား)
အင်္ဂလန်က ဘင်သံကြားရတော့ ဒီမှာ ထိုင်ရမလို-ထ,ရမလို။ သူတို့ဆီမယ် ကိုဗစ်မျိုးကွဲအသစ်က ကူးစက်တာတွေ များလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ လယ်အထိ လော့ဒေါင်းတွေချမယ်ဆိုတာကိုး။ ဒီကြားထဲ တောင်အာဖရိက မှာ မျိုးကွဲတစ်ခု၊ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ မျိုးကွဲတစ်ခု – ဆိုပြန်တော့ ကိုဗစ်ကြီးက တစ်နှစ်အတွင်း အပြောင်းအလဲမြန်လှချည့်။ အခုပေါ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ အလုပ်မှ ဖြစ်ပါ့မလားလို့ တွေးချင်စရာ …။ ဒီကိုဗစ် မျိုးကွဲသစ်က ဒုက္ခပိုပေးမှာလားလို့ ပူချင်စရာ …။
(၁) ဗိုင်းရပ်စ်သဘာဝက ဒီလိုလား?
မှန်ပ။ ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်နဲ့အမျှ မျိုးကွဲတွေ ပြောင်းတတ်တာချည်း။သူတို့သဘာဝ အဲ့သလိုပြောင်းလဲနေမှ ရှင်သန်နိုင်ကြတာ။ သို့ပေတဲ့ တချို့ဗိုင်းရပ်စ်က အပြောင်းအလဲမြန်လဲမြန်တယ်။ စွမ်းလဲပိုစွမ်းလာတတ်တယ်။ တချို့ဗိုင်းရပ်စ်ကျတော့ အပြောင်းအလဲတော့ မြန်ပါရဲ့။ အစွမ်းတော့ကျသွားတတ်တယ်။ အခုကိုဗစ်မျိုးကွဲကတော့ အစွမ်းဘယ်လိုလာမယ် မသိသေးဘူး။ ကူးတာမြန်တဲ့သဘောတော့ တွေ့ရတယ်။
(၂) ဘာလဲ မျိုးကွဲ ဗီဇ ဆိုတာ?
Mutation လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ ပမာနဲ့ပြောမယ်။
ကိုဗစ်ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကို စာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် စာလုံးရေ ၃၀၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်လိုမယ်ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားကို အဲ့သလိုစာလုံးရေ ၃၀၀၀၀- လောက် စာရိုက်ခိုင်းရင် စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့နေရာ တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာပါမယ် ။ အကျင့်မရှိရင် ဒီ့ထက်ပိုများနိုင်တယ်။ စာလုံးပေါင်း(သတ်ပုံ)က စာတစ်ပုဒ်လုံးကို အဓိပ္ပါယ်မပြောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တချို့စာကြောင်းတွေကိုတော့ အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းစေနိုင်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စာကြောင်းဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း အဲ့လိုပဲပေါ့။ သူက လူ့ဆဲလ်ထဲဝင်လာပြီး သူ့ကိုယ်ပွားတွေ ထုတ်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားတာပဲ။ အဲ့သလိုညွှန်ကြားတဲ့အခါ တချို့စာလုံးပေါင်းလေးတွေ လွဲတယ်။ ဒါပေသိ ဗိုင်းရပ်စ်မှာ သိသိသာသာပြောင်းသွားတာမျိုး ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာ။ တချို့ စာလုံးပေါင်းတွေမှားရင်တော့ အပြောင်းအလဲက ကြီးနိုင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ -သတ်ပုံအမှား- တွေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ အဲ့သလိုစောင့်ကြည့်နေလို့လဲ အခုလို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲနေတဲ့ သတ်ပုံအမှားတွေ ( mutation) ကို ထုတ်ပြန်နေနိုင်နေကြတာပေါ့။
အင်ျဂလနျက ဘငျသံကွားရတော့ ဒီမှာ ထိုငျရမလို-ထ,ရမလို။ သူတို့ဆီမယျ ကိုဗဈမြိုးကှဲအသဈက ကူးစကျတာတှေ မြားလို့ ဖဖေျောဝါရီလ လယျအထိ လော့ဒေါငျးတှခေမြယျဆိုတာကိုး။ ဒီကွားထဲ တောငျအာဖရိက မှာ မြိုးကှဲတဈခု၊ နိုငျဂြီးရီးယားမှာ မြိုးကှဲတဈခု – ဆိုပွနျတော့ ကိုဗဈကွီးက တဈနှဈအတှငျး အပွောငျးအလဲမွနျလှခညျြ့။ အခုပျေါနတေဲ့ ကာကှယျဆေးတှေ အလုပျမှ ဖွဈပါ့မလားလို့ တှေးခငျြစရာ …။ ဒီကိုဗဈ မြိုးကှဲသဈက ဒုက်ခပိုပေးမှာလားလို့ ပူခငျြစရာ …။
(၁) ဗိုငျးရပျဈသဘာဝက ဒီလိုလား?
မှနျပ။ ဘယျဗိုငျးရပျဈဖွဈဖွဈ အခြိနျနဲ့အမြှ မြိုးကှဲတှေ ပွောငျးတတျတာခညျြး။သူတို့သဘာဝ အဲ့သလိုပွောငျးလဲနမှေ ရှငျသနျနိုငျကွတာ။ သို့ပတေဲ့ တခြို့ဗိုငျးရပျဈက အပွောငျးအလဲမွနျလဲမွနျတယျ။ စှမျးလဲပိုစှမျးလာတတျတယျ။ တခြို့ဗိုငျးရပျဈကတြော့ အပွောငျးအလဲတော့ မွနျပါရဲ့။ အစှမျးတော့ကသြှားတတျတယျ။ အခုကိုဗဈမြိုးကှဲကတော့ အစှမျးဘယျလိုလာမယျ မသိသေးဘူး။ ကူးတာမွနျတဲ့သဘောတော့ တှရေ့တယျ။
(၂) ဘာလဲ မြိုးကှဲ ဗီဇ ဆိုတာ?
Mutation လို့ချေါကွတာပေါ့။ ပမာနဲ့ပွောမယျ။
ကိုဗဈဆိုတဲ့ ဗိုငျးရပျဈအကွောငျးကို စာနဲ့ရေးမယျဆိုရငျ စာလုံးရေ ၃၀၀၀၀ လောကျရှိတဲ့ စာတဈပုဒျလိုမယျဆိုပါစို့။ ခငျဗြားကို အဲ့သလိုစာလုံးရေ ၃၀၀၀၀- လောကျ စာရိုကျခိုငျးရငျ စာလုံးပေါငျးမှားတဲ့နရော တဈနရောမဟုတျ တဈနရောပါမယျ ။ အကငျြ့မရှိရငျ ဒီ့ထကျပိုမြားနိုငျတယျ။ စာလုံးပေါငျး(သတျပုံ)က စာတဈပုဒျလုံးကို အဓိပ်ပါယျမပွောငျးနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ တခြို့စာကွောငျးတှကေိုတော့ အဓိပ်ပါယျ ပွောငျးစနေိုငျတယျ။ အရေးကွီးတဲ့ စာကွောငျးဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈကလညျး အဲ့လိုပဲပေါ့။ သူက လူ့ဆဲလျထဲဝငျလာပွီး သူ့ကိုယျပှားတှေ ထုတျပေးဖို့ ညှနျကွားတာပဲ။ အဲ့သလိုညှနျကွားတဲ့အခါ တခြို့စာလုံးပေါငျးလေးတှေ လှဲတယျ။ ဒါပသေိ ဗိုငျးရပျဈမှာ သိသိသာသာပွောငျးသှားတာမြိုး ဖွဈခငျြမှဖွဈတာ။ တခြို့ စာလုံးပေါငျးတှမှေားရငျတော့ အပွောငျးအလဲက ကွီးနိုငျတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈရဲ့ -သတျပုံအမှား- တှကေို မကျြခွမေပွတျ စောငျ့ကွညျ့နကွေတာပါ။ အဲ့သလိုစောငျ့ကွညျ့နလေို့လဲ အခုလို အခြိနျနဲ့ တဈပွေးညီ ပွောငျးလဲနတေဲ့ သတျပုံအမှားတှေ ( mutation) ကို ထုတျပွနျနနေိုငျနကွေတာပေါ့။
Previous Article “ရုရှားရေတပ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း PROJECT 955A BOREI-A အတန်းအစား နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးရေငုပ်သင်္ဘော ၂ စီးအား တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ခြင်း”
Next Article ထရန့် ထောက်ခံသူ လူအုပ်ကြီးမှကွန်ဂရက် အား ဝင်ရော က်စီးနင်း-(ဒုသမ္နတ မိုက်ပင့်စ်က အမေရိကန် သမိုင်းတွင် အမှောင်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သော နေ့တနေ့အဖြစ် ပြောဆို)